I-Paint Castellani (i-Fukortsin) isisombululo sezidakamizwa esihlangene nesinezifo ezinamakhemikhali antifungal. Kungumuthi wokubulala amagciwane, ngakho-ke, usetshenziselwa ukulimala okuhlukahlukene, ukulimala kanye nezifo ze-membrane noma isikhumba.
I-Paint Castellani: ukwakheka
I-Fukortsin iyinhlanganisela yezidakamizwa. Yenziwe ngomuthi.
Ukulungiselela kuhlanganisa: i-phenol, i-resorcinol, i-boric acid, i-acetone, amanzi ase-distilled, u-ethyl utshwala kanye ne-magenta. Lo mkhiqizo utholakala ngesisombululo esicacile sombala obomvu, nge-phenol ezwakalayo iphunga.
I-Paint castellani: izindlela zokusebenzisa kanye nezinkomba
Ukuze uthole ukwelashwa okuphumelelayo kwezifo ezihlukahlukene zesikhumba ze-pustular;
Ukuphulukiswa okusheshayo kwe-abrasions, ukukhulelwa, kanye namanxeba angaphandle kanye nokuqhekeka kwesikhumba.
Izimo zalesi sombululo zinikeza umthelela onokwethenjelwa, obizwa ngokuthi yi-antimicrobial, ngenxa yokuthi yiziphi izifo ezithathelwanayo izifo ezithombeni noma izikhumba zomuntu, ezibucayi kwizingxenye zomuthi, ziyafa. Ngenxa yalokho, i-Castellani yepende, imfundo ehlanganisiwe, ibeka ngokuphelele ukutheleleka, ngenkathi iwuqeda ngokushesha.
Isidakamizwa, kuphela ukufika kwilonda, ngoba imizuzwana embalwa idala ubuhlungu obukhulu noma ukuzwa okuncane okuvuthayo.
I-Paint Castellani: Ukungafani
I-liquid ayikwazi ukusetshenziselwa ezindaweni ezinkulu zesikhumba ngezilonda ezahlukene. I-Phenol, equkethe isisombululo, inekhono elihle lokungena ngokushesha egazini. Ngenxa yalokhu, imiphumela yaso enobungozi ingabonakala, ekhombisa ubuthakathaka, isizungu, noma ukucindezela.
I-Fukortzin ayinqatshelwe ukusetshenziswa ngenkathi i-lactation noma ukukhulelwa, kanye nokuzwela okwenyukayo noma ukungaboni ngaso sonke isikhathi izingxenye ezenza lesi sidakamizwa.
Ungasebenzisi le nqubo yezingane ezincane ngaphandle kokuqokwa kochwepheshe.
I-Castellani engenabala engenayo i-Paint
Kuze kube manje, ukuguqulwa okungenambala kwe-Fukorcin (i-Castellani Gefa V) kuyanda kakhulu. Lesi sidakamizwa sinesakhiwo kanye nesenzo esifanayo njengesisombululo se-Castellani, nakuba singenayo umbala onjalo.
I-Fukortsin ngumkhiqizo wezokwelapha oyingozi, okuyinto edangele kakhulu ukusebenzisa ngaphandle kwemvume, ngaphandle kokuqokwa kukadokotela. Uma usola isifo sesikhumba, njenge-fungus, udinga ukubonisana nesazi ngokushesha ngangokunokwenzeka iseluleko, ngoba ukuhlolwa kwakho kungase kube iphutha. Udokotela uzokusiza ukhethe inkambo efanele yokwelapha ngaphandle kokulimaza impilo yakho. Akufanele futhi isetshenziswe ngaphambi kokuvakashela kudokotela waseCastellani ngoba isixazululo, ngenxa yembala yaso engavamile, sishintsha ukubukeka kwemisipha kanye nombala wesikhumba ngemuva kokusebenza. Lokhu kungavimbela ukuxilongwa okufanele kwalesi sifo. Okuhlukile kuphela i-Castellani engenambala.
Ukudweba kwePolymer: izinhlobo nezinhloso
Finishing indlu yamapulangwe - inhlanganisela usizo, ukuqina nobuhle